Rice Agba Sorter Machine na discolor Wepụ osikapa na Foreign ihe onwunwe
-Eri-irè ikike elu sorting.The ọhụrụ Rice Agba Sorter na mbụ oke maka Rice processors achọ Ownership, nkwa na arụmọrụ nke Optical Sorting nketa na technology na ihe oké ọnụ price.
Marie osikapa agba sorter igwe bụ ezigbo maka processors Rice Ụdị ọzọ dị iche iche iche Rice na dị iche iche nhazi stages.The Sorting nso adabara processors na ọzọ na kasị elu enwe Ịnụrụ Marie osikapa àgwà, àjà nkenke Sorting jirichaa Dịkwuo zaa na uru.
Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè na-ewepu ahụkarị obi na-ama aka ntụpọ na Foreign ihe onwunwe; discolouredgrains, chalky mkpụrụ, bran streaks, ruo, nkume na-achọghị Foreign Mkpụrụ, arụchaala Ịhapụ Ụdị, dị ọcha, na nchebe.
Họpụta anyị na-ekwu red, odo, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mkpụrụ, chalky Rice, Rice ọmụmụ akabeghị aka na discolored, na mkpụrụ blackspotted ntụpọ erughị 0.25mm.
Anyị nwere ike idozi nwa na ọkụ mkpụrụ, discolored, ndị ọzọ ojii spotted.And ọ bụla nwere ntụpọ mkpụrụ.
Standard usoro nke sorter si ime ihe nwere ike kọwara dị ka ndị a:
Ọsọ ọsọ ngwaahịa na kwajuru na sorter via na-fiidi hopper.With enyemaka nke ihe ọma jijiji aga n'okporo paseeji, a fan ka Distribution channels.Then ngwaahịa Nnyocha odụk mpaghara, ebe ọ na-lechara akwa-eji sensọ ma ọ bụ CCD -cameras.Cameras, ebe ha anatagh Ṅomiri ìhè si họrọ ihe onwunwe, igbanye electric ọkọlọtọ Computer Ọrụ usoro.
A pụrụ ịdabere na Electronics Hardware
The Hardware na haziri na mfe replaceable Electronic mbadamba,
The Ultimate iji FPGA technology;
Njide onwe onye Ọrụ, pụtara ọtụtụ auto-nchoputa na akpaaka-mmezi na-Standard ọ bụla na sorters;
Back-elu nke software site USB Ịwa osisi.
The elu na-agba mgbaàmà elaboration na nkwurịta okwu na a chụọ usoro na-enye ohere magburu onwe arụmọrụ.
ALTERA ụlọ ọrụ elu-ọsọ FPGA nhazi si USA
Samsung mgbawa si South Korea
Toshiba igwefoto mmetụta si Japan
SMC on Iyo si Japan
Schneider na Gbanye na Gbanye button si France
Pụtara Ọfọn ike ọkọnọ si Taiwan
Matriks ejector si Italy (Optical)